Category England – Jowharsport Wararka Ciyaraha
Macalinka reer Portugal Jose Mourinho ayaa markaan usoo jeestay inuu isku shaan dheen ku sameeyo ku sameeyo xidigaha ku sugan garoonka Stamford Bridge macalinkan ayaa bilihii ugu horeeyay ku mashquulsanaa sidii uu Blues ugu soo iibin lahaa laacibiin tayo wanaagsan. More... by hanad | Published 9 months ago
By hanad On Tuesday, July 16th, 2013 0 Comments Liverpool oo xaqiijisay inay soo diiday dalabka Arsenal ee ku wajahnaa Luis Suarez. Agaasimaha kooxda Liverpool Ian Ayre ayaa xaqiijiyay in kooxda ay diiday dalab ka yimid Arsenal oo ku aadan Luis Suarez, isagoo sheegay inay doonayaan in xiddiga reer Uruguay ay ku sii hayaan Anfield. More... By Baastoyare On Wednesday, February 27th, 2013 0 Comments Chelsea ayaa waajihi doonto Man United quater final-ka FA Cup-ka Chelsea ayaa usoo gudubtay quater final-ka FA Cup-ka iyadoo balansatay Man United , kadib markii ay Middlesbrough ku garaaceen 0-2.
Kulankii ka dhacay garoonka Riverside Stadium ayaa Benitez 8 ciyaariyahan More... By Baastoyare On Wednesday, February 27th, 2013 0 Comments Middlesbrough vs Chelsea FA Cup wareega 5-aad Chelsea ayaa cawa booqandoonto Middlesbrough kulanka ugu dambeeyo ee wareega 5-aad FA Cup-ka iyadoo kii soo baxo afka u galidoono Man United iyo Old Trafford.
Chelsea ayaa guuldaro xun kala kulantay Man City maalintii More... By Baastoyare On Sunday, February 24th, 2013 0 Comments Santi Cazola oo Arsenal guul gaarsiiyey. Naadiga Arsenal ayaa garoonkodaee Emirates ku marti galiyey Atson Villa wareega 27-aad ee Premier League-ga iyagoona kaga adkaday 2-1.
Wenger ayaa afar badal ku sameeyey kooxdii ka hortagtay Bayern Munich isago More... By Baastoyare On Sunday, February 24th, 2013 0 Comments Qpr 0-2 Man U lasii fogaatayna Premier League-ga Man Utd ayaa guul kasoo gaartay kulanki ay la ciyaareen naadiga ka dhisan London ee Qpr wareega 27-aad ee Premier League-ga.
Shayaadhiinta Cas ayaa sii fogeeyey farqiga ay ku hogaaminaayen horyaalka iyago ka dhigay More... By Baastoyare On Saturday, February 23rd, 2013 0 Comments Man Utd oo qaabilidonto QPR Premier League-ga Naadiga Man Utd ayaa garoonkooda Old Trafford ku qaabilaysa naadiga QPR usbuucii 27-aad ee horyaalka Premier League-ga .
Man utd ayaan guuldaro dhadhamin 14 kulan ee horyaalka 16 kulanna dhaman koobabka More... By Baastoyare On Saturday, February 23rd, 2013 0 Comments Arsenal vs Astonvilla Naadiga Arsenal ayaa marti galin doonto naadiga Astonvilla kulan ka tirsan wareega 27-aad ee horyaalka Premier League-ga .
Arsenal ayaa guudaro kala kulantay kulankii habeenka arbacada ka hotageen naadiga Bayern More... By Baastoyare On Monday, February 18th, 2013 0 Comments Man United oo 2-1 kaga badisay Reading Manchester United ayaa caawa gurigeeda Old Trafford ku marti galisay naadiga ka Reading kulan ka tirsan FA Cup-ka iyadoo usoo gudubtay wareegada dambe ee koobkan
Sir Alex ayaa nasiyey Rooney , halka More... By Baastoyare On Monday, February 18th, 2013 0 Comments Wilsher oo naadigiisa Arsenal ugu baaqey inay Chelsea ku tusaala qaataan. Jack Wilshere ayaa naadigiisa Arsenal ku booriyey inay diirada saaran kulanka Champions League-ga ay la balansanyihiin Bayern Munich habeenka arbacada.
Ciyaariyahanka qadka dhexe uga ciyaara qaranka England More... Next Page »